Zvitoro zveApple Zvinopemberera Zuva rePasi nekushandura Ruvara rweiyo Logo | IPhone nhau
Zvitoro zveApple Zvinopemberera Zuva rePasi nekuchinja Logo Ruvara
Musi waApril 22, Zuva rePasi rinocherechedzwa uye seuchapupu hwekuzvipira kwaApple kune zvakatipoteredza, iyo Cupertino-based firm yakachinja ruvara rwe logo kuva girini, kufamba kweApple icho chave chinhu chakajairika. Kwechinguva ikozvino, Apple inoratidza kuzvipira kwayo kuzviitiko zvakasiyana kana mhemberero kana kana ichipembererwa Zuva reAIDS Panyika, mariri chinja kambani logo yemuvara mutsvuku. Asi panguva ino, Apple haina kuzvigumira pakushandura chete ruvara rwechiratidzo, asi yakapihwa t-shirts girini kune vashandi, t-shirts ivo vaachapfeka kusvika musi wa22.
Seumbowo hwekuzvipira kwaApple kune zvakatipoteredza, mune yekupedzisira kiyi Apple yakatiratidza kuburikidza nemavhidhiyo akati wandei, maitiro anoteverwa nekambani edza kudzokorora huwandu hwakawanda hwezvinhu zvemidziyo yaunorangarira kuedza kusvibisa nharaunda zvishoma sezvinobvira. Liam, nderimwe remarobhoti akagadzirwa kuti aite basa iri, uye izvo zvatakambotaura nezvazvo panguva iyoyo, ndiye anoona nezvekuparadzanisa chimwe nechimwe chezvinhu zvemidziyo, achiisa zvinhu zvakaburitswa zvekuzogadzirisazve.
Parizvino zvimwe zveApple Chitoro izvo kambani yakavhura mumwedzi yapfuura vari kuwana magetsi ese akakosha kuti vashande kubva pasimba rezvemagetsi, sezvazviri neApple Chitoro chekupedzisira chakavhurwa muBrussels kana zvimwe zvekupedzisira Apple Stores izvo kambani yakavhura kuChina. Zvirongwa zveApple zvenguva yemberi zvinopfuura nekugadzira minda mikuru yemasolar solar kuti vakwanise kupa mafekitori anounganidza zvigadzirwa zvavo nemagetsi anodiwa kuita zvese izvi, uye nekudaro kukwanisa kuisa parutivi kusvibisa magetsi senge marasha, anoshandiswa zvakanyanya se kunobva simba muChina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Zvitoro zveApple Zvinopemberera Zuva rePasi nekuchinja Logo Ruvara
IPhone marara ndeye goldmine yeApple
Badland 2 inoderedza mutengo wayo kwenguva shoma